Lasa maditra loatra i ‘Peppa Pig’ ho an’ireo mpanao sivan’i Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Mey 2018 8:43 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, English, Français, Italiano, čeština , English
Adikan'ny shinoa mpiserasera sasany ho amboamboarina na faikany ny finamanan'i Peppa sy i Suzy. Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Peppa Pig.
Tafiditra ho ao anatin'ny lisitra lava dia lava amin'ny vokatra ara-kolontsaina voasivana ao Shina ilay fandaharana mahafinaritra Peppa pig.
Vao napetraky ny Douyin, sehatra lahatsary malaza, ho ao anatin'ny lisitra hosivanina ny Peppa Pig, sarimiaina malaza dia malaza hoan'ny ankizy. Nanaisotra lahatsary mihoatra ny 30.000 ahitana ity mpiantsehatra miloko raozy ity ny orinasa ary nanao ny voambolana “Peppa Pig” ho tsy azo tadiavina ao amin'ny tranonkalany.
Fa inona no mety ho nataon'ity kisoa maranintsaina aloha loatra miloko raozy ity nahatonga azy ho ao anatin'ny lisitry ny voasivana? Nanapaka ny Fiaraha-monina Mirindra ve izy?
Tamin'ny Avrily 2018, fanehoan-kevitra hita ao amin'ireo sehatra fampitam-baovao tantanin'ny fanjakana sy ny antoko, ao amin'ny Xinhua sy ny People’s Daily no milaza sompirana fa ho avy haingana ny fandraràna. Mpaneho hevitra iray avy amin'ny seha-baovao miankina amin'antoko no nitsikera ireo zana-kolontsaina mampifandray an'i Peppa Pig sy ny “Shehuiren”, voambolana iray midika ara-bakinteny hoe “lehilahy ao amin'ny fiarahamonina” ary manondro ireo jiolahimboto avy amin'ny triad. Any Shina, ny triad dia fantatry ny rehetra ho sampan'ny iray amin'ireo andian-jiolahy mahasehaka ny firenena.
Milaza ny fanehoan-kevitra avy ao amin'ny People's Daily [Gazetim-Bahoaka mivoaka isan'andro]:
Arakaraka ny hampifandraisana an'i Peppa Pig amin'ny Shehuiren, no anahian'ny olona fa ho potika i Peppa Pig. Efa maromaro amin'ireo mpianatra fanabeazana fototra sy ny kolejy no mampidera ireo kojakoja ahitana an'i Peppa Pig. Misy aza moa ireo manararaotra ity zana-kolontsaina ity mivarotra vokatra hosoka mba hahazoana tombombarotra. Tokony hitandrina amin'itony karazana zanakolontsaina itony isika. Tsy tokony avelantsika handrava ny fahazazan'ny kilonga, hanitsakitsaka ny lalàna sy tsy hiraharaha ny tsipika eo ambany i Peppa Pig.
Tamin'ny volana aogositra 2015 no nanafatra tamin'ny fomba ofisialy ny andiany Peppa Pig ny China Central Television (CCTv) tantanin'ny fanjakana. Avy eo izany nivoaka tamin'ny sehatra lahatsary an-tserasera Youku sy Aiqiyi. Tao anatin'ny herintaona dia efa mihoatra ny impolo miliara ny isan'ny nijery ny sarimiaina. Tao amin'ny Youku fotsiny, mahazo jeripejy mihoatra ny enina tapitrisa isan'andro i Peppa Pig.
Ireo vokatra nivoaka lasa mirazotra amin'ny Peppa Pig
Tsy isalasalàna fa sarimiaina malaza eo amin'ny kilonga madinika ny Peppa Pig. Saingy ny tanora sy ny zatovo efa ho olondehibe no tena mpankasitraka azy. Mitranga izany satria tsy mijery ny ôrizinaly ry zareo, fa ireo andiana “asa nivoaka avy aminy” manasongadina ireo sarimiaina avy amin'ny programa Peppa Pig, saingy ahitana dikantsoratra amin'ireo tenimparitra shinoa, ahitana fiteny isan-karazany.
Ny lahatsary YouTube eto ambany izao dia anisan'ny sombim-pizaràna Peppa Pig malaza indrindra amin'izay ahitana dikantsoratra amin'ny fiteny kantôney:
Nalaina avy amin'ny fizaràna ahitana an'i Peppa sy i Suzy Sheep [Ondry] mifamaly, nanaovana dikantsoratra amin'ny tenin'olondehibe ny lahatsary. Hita ao amin'ny tantara tokoa manko fa mifaninana amin'izay hisintonana ny fifantohan'izay mety ho sipany [lahy] i Peppa sy i Suzy.
Mazava loatra fa mora mianjera ao amin'ny votoaty mivantambatana, araka ny nofaritan'ny fitsipi-panjakana amin'ny votoaty an-tserasera, ireny asa mivoaka lasa mirazotra aminy ireny.
Na dia mety ho maditra tahaka izany aza ireny lahatsary ireny dia efa ela no nisiany tsy niatrika olana, ka mahatonga ny fandraràn'ny Douyin ho setriny avy amin'ny tsikeran'ireo mitondra ny tenimpanjakana amin'ny fifaningoran'ny Peppa Pig sy ny Shehuiren, sy ny fisandratan'ny vokatra Peppa Pig toy ny stickers, famataranandro ary fonon'ny finday.
Tombokavatsa Peppa pig. Pikantsary avy amin'ny lahatsary iray malaza.
Nisongadina ny kolontsaina rehefa nanatona ny faran'ny taona 2017, raha nisy lahatsary iray nalaza vetivety nampiseho ny soritsoritra Peppa Pig tao an-damosin'ny lehilahy iray nahatonga sary-sy-soratra video tamin'ny sehatra isan-karazany, niteraka ny fomba fitenenana malaza iray hoe:
Manaova tombokavatsa Peppa kisoa, mahazo tehaka i Shehuiren.
Nisy ihany koa ny fomba fiteny iray taoriandriana kokoa mampifandray an'i Shehuiren amin'ny kolontsaina hooligan [jiolahimboto] nalaza tamin'ny sehatra lahatsary isan-karazany:
Manaova tombokavatsa Guan Yu, mahazo tehaka i Shehuiren.
Olona manantantara ivavahan'ny fikambanan-jiolahy shinoa i Guan Yu. Hatramin'ny fotoana nipaingorana ny sary-sy-soratra tamin'ireo video izay mampihevitra ireo toetran'ny Shehuiren, nivoatra ilay voambolana ka lasa esoeson'ireo mpiseran'ny sehatra lahatsary tsy manaja ny etikan'ny asa fijerin'ny besinimaro.
Ny saimbôlisma [sariohatr'i] Peppa Pig
Fanehoan-kevitra iray avy amin'ny Sina Tech, anefa, nanondro fa ny ankamaroan'ireo olona mampifaningotra an'i Peppa Pig sy ny Shehuiren dia ireo zatovo mpanaja fitsipika sy lalàna:
Mahatsiaro matetika ho leoleo sy mitebiteby ireo miasa amin'ny tanàna tena lehibe. Mety ho te-hifahatra hanohitra ry zareo, saingy tsy maintsy manaiky. Mihamiakatra ny fihenjanana (anaty) ka miafara amin'ny fampiasana an'i Peppa Pig ho faniriana ho tonga Shehuiren — olona manaraka ny [sitraky ny?] fony tsy ijerena lalàna sosialy — izany.
Mpisera iray hafa nanolotra fahatsapana mitovitovy amin'izany tamin'ny fanehoan-kevitra iray tao amin'ny Weibo miresaka ny famataranandron'i Peppa Pig :
Hatramin'ny nividianako famataranandro Peppa Pig Shehuiren, dia mahatsapa tena ho Shehuiren aho. Amin'io famantaranandro io, manaraka ahy amin'izay andehanako ny rivotra. Tsy famantaranandro fotsiny io, fa saimbôlin'ny sata maha-Shehuiren…
Ao amin'ny Zhihu, sehatra malaza ao Shina amin'ny resaka fanontaniana sy valiny, maro amin'ireo mpiserasera no naneho ny finoany fa ny fifandrohizan'i Peppa Pig amin'ny Shehuiren dia fanesoana ny fitsipika sosialy — hery ara-toekarena, fihatsarambelatsihy sy tetiharam-pianakaviana — ao Shina tanibe. Tafiditra amin'ny fandikàna ny sata ara-tsosialin'i Peppa ireto manaraka ireto:
1. Manankarena ny fianakavian'i Peppa — monina ao amin'ny villa ry zareo.
2. [Tsara kolokolo] i Peppa — sariaka izy, matoky tena, tsy miraharaha ary tsy manahy na oviana na oviana amin'ny vola.
3. Taranaka faharoa mpanankarena ny renin'i Peppa — monina ao amin'ny villa iray ahitana zaridaina goavana ary manana yacht [sambokelin'ny mpanankarena] ny ray aman-dreniny. Mahay mitendry lokanga ny renin'i Peppa ary miteny frantsay.
Na ny kolontsaina hooligan [andian-jiolahimboto] na ny tsikeran'ny fitsipika sosialy dia azo jerena ho mpanasaritaka manoloana ny vinam-Piarahamonina Mirindra an'i Shina. Manana fiantraikany lehibe amin'ny kolontsaina ara-toekarena ihany koa io zana-kolontsaina io.
Nitatitra ny Global Times fa ao amin'ny Taobao, tranokalan'ny e-varotra goavana indrindra ao Shina, nahalafo stickers tombokavatsa Peppa Pig/Shehuiren 30.000 sy famataranandro ahitana sarin'i Peppa Pig miisa 110.000 ny tranombarotra an-tserasera iray tao anatin'ny iray volana monja. Nahita ny vola azo avy amin'ny copyright niakatra aoka izany ny mpitsinjara ny Peppa Pig ao Shina, raha nanambara ny orinasa iray miorina ao amin'ny Fanjakana Mitambatra Entertainment One fa nahatratra fitomboana mihoatra ny 700% ny vokatra nahazoana alalana ao Shina tamin'ny enimbolana voalohany amin'ny taona 2017 — ary mbola mihamiakatra sy mivelatra ny tsena shinoa.
Na izany aza, ny fandraràn'ny Douyin dia manamarika fa manana fahefana hamotika ny tsena ara-kolontsaina ireo manampahefana shinoa misahana sy sivana raha vao maditra loatra i Peppa Pig na ireo fanorolahy sy fanorovavy avy amin'ny sarimiaina vahiny.